Iindaba - Malunga nenkampani yethu
Inkampani yethu yinkampani yeshishini elinye lokumisa elidibanisa uphuhliso lwamalaphu, uyilo lwemveliso, imveliso kunye nentengiso. Eyona mveliso iphambili isebenzisa uphando oluzimeleyo kunye nophuhliso lwamalaphu, afana ne-spandex latex (umphezulu weoyile / isipili ngaphezulu), usebenzisa i-warp knitted lining lining, ilaphu linobungqongileyo kwindalo, inkqubo ye-arhente ephezulu yokuqina, kwaye iyahlangabezana nomgangatho wokufumanisa uqhagamshelo lwe-CNAS ; Iziphumo ziyafana nezinto zendalo zeLatex, kodwa ixabiso kuphela yi-1/3 yengubo yelatex yendalo, ukwenzela ukuba abathengi abaninzi bonwabele ubukhoboka obulula be-sexy obuziswe yingubo yejeli, kwaye babone imeko yesitayile yeethayithi zangoku.
Zininzi ubukhulu beempahla zethu ezilungele ukunxiba. Ukuze ulingane ngakumbi iimilo zomzimba ekhaya nakumazwe aphesheya, ezinje ngothotho lwe-F kunye no-T uthotho, uluhlu olufanelekileyo yi-150-180CM ukuphakama, kwaye ubunzima busuka kwi-40kg ukuya kwi-90KG. advanced ukusika lathe, ungenza ubungakanani ahlabayo ichaneke ngakumbi kakuhle ngakumbi, kwaye inkqubo yayo CAD ubungakanani okrelekrele isizukulwana ivumela isantya ulwenziwo yemveli ukuba ziphuculwe kakhulu.
Sithatha "ukuyila imfashini, ukwenza ngokwezifiso i-sexy" njengenjongo yeshishini, ukwenza ifashoni yokutsala kunye nokuvumela iqonga linxibe ngokungaqhelekanga.
Uhlobo lweMveliso: isitayile esilula kunye nesithandwayo saseYurophu naseMelika!
Iimpawu zoyilo: Iimpahla zangaphantsi ezinemfashini, ifashoni enomdla. Yenza impahla yangaphantsi onokuyinxiba ukwenza ifashoni ibe ntle ngakumbi!
Umsebenzi wethu: yenza ubomi bube ngcono!
Sisoloko sikhokela indlela enomdla kwaye sibe yinto yokulandelwa kolu shishino. Okwangoku, ukuhamba kwindlela abanye abafuna ukuhamba ngayo kodwa bangoyiki! I-MiaSein inyanisile idibanisa iiarhente zamajelo amaninzi kunye namaqabane ukwenza uphawu lwendlela yokuqala yokunxiba!
Emva kwemizamo yethu eqhubekayo, umthamo wentengiso yeethpandex zethayithi zethu ezithunyelwa ngaphandle kwiimarike zaseYurophu naseMelika idlule kwi-US $ 1 yezigidi. Olu luphumeleleyo olutsha kwimbali yethu yokuthengisa. Siza kuqhubeka nokwandisa nokuphucula iimveliso zethu ukuze iimveliso zethu zithandwe ngakumbi. Siqeshe umyili omtsha oza kusizisela iindlela ezingcono nezithandwayo. Iimveliso zethu zigqitywe ngokuzimeleyo kwilaphu ukuyila, ukuvelisa kunye nokuthengisa. Oku kusivumela ukuba silawule ngcono umgangatho wemveliso, silungelelanise imveliso ngexesha elifanelekileyo, sive ingxelo yabathengi okokuqala, kwaye siqhubeke siphucula iinkonzo zethu zemveliso. Iimveliso zethu zinegama elihle ekhaya nakwamanye amazwe, kwaye ukuthengiswa kwamaqonga amaninzi ekhaya nakwamanye amazwe kuyanda ngokuthe chu. Abathengi bethu babandakanya abathanda iimpahla zekati, kunye neearhente zasekhaya nezangaphandle kunye neevenkile. Baye bagcina ukuthengisa okuhle. Sinethemba lokuba abathengi abaninzi kunye nabathengisi beearhente baya kukhetha iimveliso zethu. Sinqwenela ukuba iimveliso zethu zingathengiswa zineembombo zonke zehlabathi.